"Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Romana 1:16 Mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana." 2 Timoty 4:2
Tany andrefan’i Etazonia dia nisy mpamboly iray efa zokiolona, kristiana mafana fo, izay nanararaotra ny fotoana rehetra hiresahana momba ny Tompony. Indray andro izy dia nitsidika ny zanany lahy, senatera tany Washington, izay nampahafantatra azy tamin’ny ambasadaoron’i Belzika. Tampotampoka teo dia nanontany ity ambasadaoro ilay zokiolona: «Hono hoy aho, tompokolahy hajaina, tena kristiana marina ve ianao? Ahoana ny amin’ny fanahinao?» Sadaikatra ny zanany tamin’izany fanontaniana izany, ka kinga ery; namily ny resaka, mba tsy ho voatery hamaly ilay ambasadaoro.
Volana vitsivitsy taty; aoriana dia maty ilay zokiolona. Toa inona ny hatairan’ilay zanany, nahita fehezam-boninkazo nalefan’ny ambasadaoro belza, tao anatin’ireo marobe voarainy! Ilay ambasadaoro mihitsy no nanoratra teny kely. Nanganohano ilay senatera namaky ny teny mampihetsi-po momba ny rainy, hoe: «Izy irery, teto Etazonia, no mba nihevitra momba ny fanahiko ka nanontany raha kristiana aho».
Firy ny olona miresaka amintsika isanandro? Fantany ve Jesosy, Ilay Zanak’Andriamanitra? Inona no hoavin’izy ireny, raha tonga anio ny Tompo? Aza avela handalo ny fotoana fanararaotra, hisarihana ny sain’ireo olona mifanena amintsika mba hihevitra ny hoavin’ny fanahiny ho mandrakizay. Ry kristiana, aoka tsy hisy olona afaka hiteny momba antsika hoe: Nifanena taminy matetika aho, nefa tsy mba niraharaha mihitsy izay hiafaran’ny fanahiko izy.
“Ny hendry dia mahataona olona”, hoy i Solomona mpanjaka (Ohabolana 11:30).